Krizin’ny Covid-19: tafakatra 200 000 Ar ny volamena 1g | NewsMada
Krizin’ny Covid-19: tafakatra 200 000 Ar ny volamena 1g
Azo ampiasaina amin’ny fifanakalozana vola eo amin’ny tsenambola iraisam-pirenena ny volamena. Midangana ny vidiny sy ny sandany amin’izao fotoana isian’ny krizy momba ny vola ateraky ny Covid-19 izao. Voakasik’izany ny volamena eto an-toerana fa indrindra koa ny any ivelany sy ny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Eto Madagasikara, manodidina ny 200 000 Ar ny vidin’ny volamena iray grama eo amin’ny tsena ofisialy avoakan’ireo matihanina iraisam-pirenena amin’ny tsenambolamena. Maherin’ny 240 000 Ar ny iray grama raha karazana 24 carats (tsara sy ambony kalitao), vidiana 182 000 Ar raha 18 carats, ary 81 000 Ar raha 8 carats. Manodidina ny 80 000 Ar hatramin’ny 120 000 Ar ny vidiny handraisan’ny mpanangona volamena any amin’ireo mpitrandraka any ambanivohitra rehetra any satria tsy mbola voafaritra ny kalitaony (carats) na ambony na ambany. Manodidina ny 160 000 Ar hatramin’ny 200 000 Ar kosa any amin’ireo mpanefy firavaka eto an-toerana.
Mihen-danja ny dolara
Eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, vao mainka midangana ny vidin’ny volamena. Misanda 1 957 dolara ny vidin’ny volamena 1 once (1 once= 28,35 grama), vidiny ambony indrindra eo amin’ny tsenambolamena iraisam-pirenena, ary mety hihoatra ny 2 000 dolara any amin’ny tsena aziatika. Nahatonga izany ny krizy Covid-19 ka nidina ny sandan’ny vola dolara amerikanina, sady eo koa ny ady toekarena eo amin’i Etazonia sy i Sina, mikasika an’i Hong-Kong.
Marihina fa efa manodidina ny 1.900 Ar koa ny sandan’ny iray dolara amin’izao fotoana izao.